Maalinkii labaad iyo shirka teendhada Afisiyooni | KEYDMEDIA ONLINE
Maalinkii labaad iyo shirka teendhada Afisiyooni
Waxaa maanta lagu wadaa inuu halkiisa kasii socdo shirkii Golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya kaasoo shalay ka billowday Teendhada Afisiyooni
MUQDISHO, Soomaaliya - Maalintiisii labaad ayuu galayaa shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ee shalay ka furmay teendhada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho.
Shirka waxaa ka maqan madaxweyne Farmaajo, waxa uuna u muuqdaa mid rajadiisu ka wanaagsan tahay sidii hore, dhammaan hoggaamiyayaasha dowlad goboleedyada ayaa si niyad sami ah uga soo qeyb galay shirka, mana muuqato ilaa iyo hadda wax rajo xumo ah oo laga soo sheegayo shirka tan iyo markii uu furmay inkastoo warar hordhac ah oo la helay ay sheegayaan in natiijo wanaagsan uu ku dhammaan doono.
Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Mucalimuu oo ka hadlayay warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in heshiis lagu gaaray kulankii shalay ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadalkaas, waxa uuna bulshada la wadaagay in aan weli wax heshiis ah lakala saxiixan, balse uu shirku ku billowday si wanaagsan, iyadoo loo turayo shacabka Soomaaliyeed oo ah kan ugu badan ee ay dhibaato kasoo gaarto haddii uu qalalaase dhaco.
Inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin xilliga uu socon doono shirka, haddana waxaa la saadaalinayaa in maalmaha soo socda lagu soo af meeri doono shirka Golaha wadatashiga qaran ee Teendhada Afisiyooni ka billowday shalay.
Hoggaamiyayaasha ka qeyb galaya shirka ayaa xalay kulamo gaar-gaar ah la yeeshay siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka kale ee saameynta ku leh doorashada iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Laftagareen uu kulan gaar ah la qaatay qaar kamida xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Deni ayaa la kulmay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada Waqooyi.
Dhammaan kulamada socda waxay ka turjumayaan rey-reynta iyo rajada wanaaagsan ee laga qabo shirka oo aad uga duwan kii kan ka horreeyay ee uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo. Ma jirin dhaq-dhaqaaq siyaasadeed iyo kulamo gaar-gaar ah oo ay siyaasiyiintu sameeynayeen, hoggaamiyayaasha shirka ka qeyb galayay oo kaliya ayaa ku kulmayay teendhada!